ပါမုန့် ၀က်သားကပ်ကြော် | Wutyee Food House
« အင်ဒိုနီးရှားစတိုင် အုန်းနို့ကောက်ညှင်းပေါင်း
March 23, 2011 by chowutyee ပါမုန့် ၀က်သားကပ်ကြော်
၁။ ပါမုန့် (Bread)- ၅ချပ်
၂။ ၀က်သား (Pork)- ၁၅ကျပ်သား (နှုတ်နှုတ်စဉ်းထားပါ)
၄။ ခရုဆီ (Oyster Sauce)- စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၅။ ပဲငံပြာရည် အကြည် (Light Soy Sauce)- လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၆။ ဆား (salt)- လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း
ရ။ သကြား (Sugar)- လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၈။ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် (Black pepper)- လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၉။ တရုတ်နံနံပင် (Spring Cilantro)
၁။ သခွာသီး – တ၀က် (ပါးပါးအရှည်လှီးပါ)
၂။ ကြက်သွန်မြိတ် – ၁ခု (ပါးပါးလှီးပါ) (ပါးပါးလှီးပါ)
၃။ ငရုတ်သီးတောင့်ပွ(အရှည်) – ၁ခု(ပါးပါးအ၀ိုင်းလှီးပါ)
၄။ သကြား – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်းခွဲ
၆။ ဗီနီဂါ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
ရ။ ရေနွေး – စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
၁။ အရင်ဆုံး ပါမုန့်၁ချပ်ချင်းဆီကို ၄ပိုင်းပိုင်းလိုက်ပါ
၂။ ပြီလျှင် ကျန် ပါဝင်ပစ္စည်းများ ဖြစ်သော (၀က်သား၊ ကြက်ဥ၊ ခရုဆီ၊ ပဲငံပြာရည်၊ ဆား၊ သကြား၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်၊ တရုတ်နံနံပင်) အားလုံးတို့ကို ဇလုံတစ်ခုထဲတွင် ရောနုယ်လိုက်ပါ။
၃။ ထို့နောက် ပါမုန့်ပေါ်သို့ နုယ်ထားသော ၀က်သားများကို ပုံတွင် ပါသည့်အတိုင်း ကပ်လိုက်ပါ။
၄။ ပြီနောက် ဒယ်ထဲ ဆီများများထည့်၍ ဆီပူလာလျှင် ၀က်သားကပ်ထားသည့် ဘက်သို့ အရင်ကြော်ပြီ ကျက်လျှင် နောက်တစ်ဘက်သို့ ပြန်လှန်ပေးပါ။
၅။ နီညှိုရောင်သန်းလာလျှင် ပါမုန့်လေးများကို ပြန်ဆယ်ပေးပြီ ဆီစုတ်စက္ကူပေါ်တွင် တင်ပေးထားပါ။
၆။ ထိုနည်းအတိုင်း ကျန်ပါမုန့်များကို ဆက်ကြော်ပေးပါ။
ရ။ ပါမုန့် ၀က်သားကပ်ကြော်လေးများ ရပြီ ဆိုလျှင် ဆော့ပြုလုပ်ပါ့မယ်။
၈။ ဆော့အတွက် ပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်သော (ဆား၊ သကြား၊ ဗီနီဂါ၊ ရေနွေး)တို့ကို ခွက်တစ်ခုထဲ ရောမွှေလိုက်ပါ။
၉။ ပြီမှ သခွာသီး၊ ငရုတ်ပွတောင့်၊ ကြက်သွန်မြိတ်ထည့်ထားသော ခွက်ထဲသို့ လောင်းထည့်ခြင်းဖြင့် ဆော့ရရှိပါပြီ။
၁၀။ ပါမုန့် ၀က်သားကပ်ကြော်လေးများကို ဆော့ဖြင့်တွဲစားသုံးနိုင်ပါပြီ….
Posted in ထိုင်းဟင်းလျာ ချက်ပြုတ်နည်း | 26 Comments	26 Responses
on March 23, 2011 at 5:59 am | Reply win
့ ကျနော်ဝယ်ထားတဲ့ပါမုန့်တွေမစားချင်တော့လို့ဗျာ …အခုတော့နည်းလေးရသွားလို့ လုပ်စားကြည့်လိုက်အုံမယ် ..ကျေးဇူးဗျာ..
on March 25, 2011 at 5:18 am | Reply chowutyee
Plz try it!😀
on March 23, 2011 at 7:24 am | Reply Theingi
အရမ်းကောင်းပါတယ် နောက်လဲ ဒီထပ်ကောင်းတဲ့ စားစရာတွေတင်နိုင်ပါစေ
သင်္ကြန်တွင်းအတွက် သင်္ကြန်မုန့်လုပ်နည်းတွေကို လည်းတင်ပေးပါဦးနော်
ဟုတ်ကဲ့ပါ မသိင်္ဂီ။ သင်္ကြန်နီးလာရင် သင်္ကြန်မုန့်လုပ်နည်းတွေ တင်ပေးပါ့မယ်…
on March 23, 2011 at 7:29 am | Reply Sunny
နေ့တိုင်း ပေါင်မုန့်ကို ထောပတ်သုပ်စားနေရတာ ရိုးလာပြီ.. မမ၀တ်ရည်ပြောတဲ့ ၀က်သားကပ်ကြော်လေး လုပ်စားဦးမယ်.. ကျေးဇူး မမ..
on March 25, 2011 at 5:20 am | Reply chowutyee
ဟုတ်ကဲ့ လုပ်စားကြည့်ပါနော်.. စားလို့ကောင်းတယ်…😀
on March 23, 2011 at 11:18 am | Reply Dare
Will try soon and can you post how to make fried dry eel with dried chilli?
I couldn’t find anywhere for that recipe.
on March 25, 2011 at 5:43 am | Reply chowutyee
ငါးရှဉ့်ခြောက်စပ် လုပ်နည်းလေး ရှာကြည့်လိုက်အုန်းမယ်။ ပြီရင် ပြန်ပြောပြပါ့မယ်…😛
on March 23, 2011 at 2:38 pm | Reply marysan
on March 23, 2011 at 5:08 pm | Reply ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)
ဟေးဟေး ပျော်စရာကြီးတော် လုပ်စားဦးမယ် တော်လိုက်တဲ့ဝတ်ရည်..
နည်းကောင်းလေးပေးတာ ကျေးဇူးနော် မွှမွှး)
on March 25, 2011 at 5:44 am | Reply chowutyee
ဟီးဟီး၊ မချော လုပ်စားကြည့်ပါနော်။ တကယ်စားလို့ကောင်းတယ်။ လာအားပေးလို့ မွှမွှ..😀
on March 23, 2011 at 6:36 pm | Reply chan mya mon
on March 25, 2011 at 5:45 am | Reply chowutyee
ok plz try it! It is good taste..😛
on March 24, 2011 at 12:09 am | Reply ma mie
ဟုတ်ကဲ့ မမီ၊ လုပ်စားကြည့်ပါ…
on March 24, 2011 at 12:17 am | Reply ko nyein
My son like bread, he everyday eat9slices of bread. I think, he can like this one. thank you for your post.
on March 25, 2011 at 5:46 am | Reply chowutyee
ပါမုန့်ကြိုက်ရင် ဒီချက်နည်းလေးကိုလည်း သားသား သဘောကျမှာပါ..😀
on March 24, 2011 at 8:45 am | Reply ရှင်း
on March 25, 2011 at 5:47 am | Reply chowutyee
ရှင်းက ဒီအတိုင်းလည်း လှပြီသားပါ ၀ိတ်မလျှော့ပါနဲ့။ စားသွားနော်…🙂
on March 25, 2011 at 4:52 pm | Reply ဟန်ကြည်
အင်း ပေါင်မုန့်နဲ့ ၀က်သားဆိုတော့ ၀ိတ်တွေတက်တော့မှာပဲ…ဒါနဲ့ အပေါ်ကတစ်ယောက် request လုပ်ထားတဲ့ ငါ့ရှဉ့်ခြောက်စပ်လေး ထပ်ဆင့် request လုပ်ပါရစေဦး
on April 20, 2011 at 11:06 am | Reply chowutyee
ဟုတ်ကဲ့ ခုတလော မအားဖြစ်နေလို့ပါ။ အားတာနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါ့မယ်နော်
on March 28, 2011 at 12:12 pm | Reply ငယ်လေး
Plz try it sis!
on November 28, 2011 at 1:08 pm | Reply မမိုး
on April 4, 2012 at 5:31 am | Reply chowutyee
Thanks also par Ma Moe!